Dogma » မရှိမဖြစ် Tools များ
Google က Chrome ကို – 10/10
Firefox ကို (addons နှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်အောက်တွင်ကြည့်ပါ) – 10/10
Firefox ကို, မကို Google Chrome အဖြစ်ရေပန်းစားအဖြစ်သော်လည်း, ဆဲစိတ်ကြိုက်၏ဘုရင်ဖြစ်. ဒါဟာငါ့အဘို့နီးကပ်ဒုတိယဖြစ်ပါသည်.
KeePass ကို – 10/10
ငါသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကျွန်မရဲ့ passwords ကိုစောင့်ရှောက်ရန် KeePass ရဲ့အသုံးပြု, စာဝှက်ထားတဲ့, 3rd-ပါတီထိန်းချုပ်မှုပြင်ပသိုလှောင်ထား.
Dropbox ကိုများအတွက်မရှိမဖြစ်အစားထိုး. ဒါဟာ freemium ဖြစ်ပါသည် – though I don’t haveapressing need to use the Pro Edition, ထိုသို့ပြုလျှင်အဘို့ငါဆပ်ဖို့တှနျ့ဆုတျမညျမဟုတျ.
ရနှေးငှေ့ – 10/10
ဒီ serialise မိတ္တူ / ပြောင်းရွှေ့စစ်ဆင်ရေးကိုကူညီဖို့အတွက် Windows ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. TeraCopy 64bit နှင့်ကိုက်ညီကိစ္စများခဲ့ကြသောအခါငါကကူးပြောင်းရွေ့. It only loses points for havingacluttered UX
Statusbar ကို download လုပ်ပါ – 10/10
tabs များရှိ window တစ်ခုတည်းမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သည်. သီးခြား ၀ င်းဒိုးတစ်ခုမှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ box တစ်ခုကငါ့အတွက်မလွယ်ဘူး. ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်မျက်နှာပြင်အိမ်ခြံမြေကိုလည်းသိမ်းဆည်းသည်. 🙂
သက်တမ်းကုန်ဆုံးကိန္နရီ – 9/10
သင်လက်ရှိကြည့်နေတဲ့ဆိုက်များအတွက် SSL ကိုလက်မှတ်မကြာမီသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပါကဤသပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်အနည်းငယ်မျှသာ addon သငျသညျကိုပြောတယ်. သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆိုက်တခုက SSL certificate ကိုရှိပါက, ငါသည်သင်တို့ကိုအကြောင်းကြားစာသို့မဟုတ်သူတွေရဲ့စကားတွေ၏ရိုးရှင်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်ကုန်ဆုံးသင့်ရဲ့ site ရဲ့ SSL ကိုလက်မှတ်ကိုရှောင်ရှားကိုကူညီဖို့ဒီ addon ကိုအသုံးဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်.
စာမကျြနှာမြားနှငျ့ကို web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အဘို့. နည်းနည်း code ကို၏ bits သည်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဒီဘာဂင်စာမျက်နှာများတွင်စမ်​​းသပ်ဘို့ကြောက်မက်ဘွယ်.
တိကျတဲ့ proxy ဆာဗာမှတဆင့်တိကျတဲ့စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုဘို့ကြောက်မက်ဘွယ်. This is useful for when some sites are blocked or there is breakage for inaTransparent Proxy server. 🙂
ငါလမ်းကြောင်းမှငါမဟုတ်ဘဲ default အနေနဲ့လမ်းကြောင်းမှတဆင့်မသွားဘဲနေချင်ပါတယ်ကြောင်း proxy ဆာဗာကျော်အချို့သောအသွားအလာဒီကိုသုံး. ဒါဟာအစအလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်. သငျသညျတစျဦး proxy ကိုရရှိနိုင် server ကိုသငျတို့အများအားဖြင့်သုံးပါတထက်ပိုရှိပါကရုတ်တရက်မှိတ်အပေါ်တတ်, ကိုယ့်ကိုနောက်တစ်ကူးကူးအပြောင်း. 🙂
Greasemonkey ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထည့်သွင်း. There are many available scripts online to customise pages.
NoScript အား – 9/10
NoScript အားကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းမှာ Awesome ဖြစ်ပါသည်. သင်ကြိုက်နှစ်သက်သူအပေါင်းတို့ကိုဆိုဒ်များခွင့်ရှိသူစာရင်းထဲထည့်ရန်ရှိသည်ကတည်းကပထမဦးဆုံးမှာ၎င်း၏အနည်းငယ်နာကျင်ကျိန်းစပ် – ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာအဲဒါကိုအရမ်းထိုက်သည်. 🙂
စာမျက်နှာများထမွောကျ – 10/10
သင်တစ်ဦး site ကိုမှ browse ကဆငျးသကျဖွစျဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင်အလွန်အသုံးဝင်သော. ဆိုက်အငြိမ်-content တွေကို-oriented အကယ်. ဖြစ်လျှင်ဤသူ့ရဲ့အွန်လိုင်း cached လျှင်လျင်မြန်စွာအကြောင်းအရာကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူစေသည်.
Screengrab သင်ကြည့်နေတစ်ခုလုံးကိုဝဘ်စာမျက်နှာ၏ပုံတိုးလာတယ်သောရိုးရှင်းတဲ့မျက်နှာပြင်ပုံ addon ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားထက်ပိုကြီးသည်ပင်လျှင်. ငါအကြာတွင်အပေါ်မျက်နှာပြင်ပုံဖြတ်တောက်ရန်မလိုပါဒါကြောင့်ငါအများအားဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်.
သင်တစ်ဦး server ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ plugin ကိုမပါဘဲတဆင့်သွားကြဖို့ငရဲရှိတယ်. ငါသည်ဤလုပ်ဖို့ရှိသည်ဖို့လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အသုံးပြု.
Tab ကိုရောသမ Plus အား – 8/10
သင်ပိုမိုထက် 7-သို့မဟုတ်-ဒါ tabs များရှိပါကအဘို့ကြောက်မက်ဘွယ် tab ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု.
ဗီဒီယို DownloadHelper – 9/10
ဗီဒီယို DownloadHelper streaming များကမီဒီယာများအတွက်ကြည့် – အထူးသဖြင့် download လုပ်နေပါသည်ဆိုကြီးမားတဲ့အကြောင်းအရာရှာဖွေနေ. သင် icon ကို click လိုက်တဲ့အခါ, ဒါကြောင့်သင်လက်ရှိ-ဒေါင်းလုပ်စီးပြသင်တစ်ဦးအဖြစ်ကတန်းစီဖို့ option ကိုပေးထားတယ် “သာမန်” download,.
FF crash သွားသို့မဟုတ်အာဏာကိုလျှော့ချဖို့သွားလျှင်သင်သိဘယ်တော့မှကတည်းက, ငါသည်ငါ့ desktop ပေါ်မှာတစ်မိတ္တူကယ်ဖို့ပိုနှစ်သက်င့်နဲ့ကျွန်မပြန်ဗီဒီယိုကို download လုပ်ဖို့ပို bandwidth ကိုမသုံးဘဲဗီဒီယိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်. လည်း, အလုပ်မှာ, လူတို့သည်ငါ့ youtube ကသို့မဟုတ်အခြားမီဒီယာမှဆက်သွယ်ပေးပို့ကြသောအခါ, ငါအများအားဖြင့်အပြီးအများကြီးမကုန်မှီတိုင်အောင်စောင့်ကြည့်နှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး – ငါ့ကိုယ်ပိုင်အားလပ်မှာတစ်ခုသို့မဟုတ်ချိုးစဉ်အတွင်း.